Vaovao - Toetran'ny fandaminana fametahana kodiarana aorian'ny fanaovana hosoka
Toetran'ny fandaminana fametahana kodiarana aorian'ny fisandohana
Ny fanamboarana ny fametahana kodiarana amin'ny ankapobeny dia ny fizotry ny hafanana, ny fanovana ary ny fampangatsiahana. Ny fametahana kodiarana dia mampiseho fanjakana samihafa eo amin'ny fandaminana noho ny firafitry ny fitaovana sy ny haben'ny fametahana kodiarana. Raha fintinina dia misy ireto teboka roa manaraka ireto.
1. Toetran'ny fandaminana fametahana kodiarana lehibe
Ity karazana famonoana kodiarana ity dia mazàna amin'ny alàlan'ny fanodinana vy mivantana ny vy. Noho ny hamaroan'ny hafanana (afo 6 na mihoatra) mandritra ny famolavolana, ny tsy fiovan'ny tsy fitoviana, ny tsy fitoviana amin'ny fizarana lehibe ary ny haavon'ny fitaovana avo lenta, ny endrika manasongadina indrindra ny firafitry ny famadihana kodiarana lehibe dia ny atin'ny hidrôzenina sisa tavela sy ny tsy fitoviana lehibe amin'ny firafitra. Ny fisiana (trangam-pifangaroan'ny kristaly mifangaro), izay singa iray manan-danja misy fiatraikany amin'ny fanatanterahana fametahana kodiarana lehibe, noho izany dia olana ihany koa izay tokony horesahina amin'ny famolavolana fizotran'ny hafanana amin'ny fametahana kodiarana lehibe.
2. Toetran'ny fandaminana fametahana kodiarana kely sy salantsalany
Ity karazana famonoana kodiarana ity dia miorina amin'ny famonoana ireo mombamomba azy ireo. Ho an'ny vy vyoutectoid (vy karbaona antonony, vy an-tsoroka alimika ambany karbonina), aorian'ny famolahana farany, rehefa ampangatsiahana amin'ny rivotra ny hafanan'ny efitrano, ny firafitra feritre be sy ferit ary lamellar Lamellar; ho an'ny vy vy hypereutectoid, indrindra ny vy misy karbonika avo lenta, ny fihenan-tsasatra miadana aorian'ny fametahana farany dia afaka mahazo rafitra miharo volo mihombo. Ankoatr'izay, noho ny fahasamihafana eo amin'ny endrika sy ny tsanganana amin'ny fametahana kodiarana sy ny fampangatsiahana tsy voafehy, matetika tsy mitovy ny firafitra. Mandritra izany fotoana izany, noho ny vokatry ny fihenjanana amin'ny maripana (antsoina koa hoe fihenjanana amin'ny hafanana) sy ny fihenjanana ara-drafitra, ny fihenjanana anatiny sisa hiteraka amin'ny famonoana kodiarana, noho izany dia tsy maintsy ampiasaina ny fitsaboana hafanana hitsaboana azy ireo. Hatsarao ary esory.
Ny fitsaboana hafanana amin'ny fametahana kodiarana dia mifototra amin'ny karazana famonoana kodiarana sy ireo akora ampiasaina handrafetana tsara ireo masontsivana momba ny fizotran'ny hafanana. Ny maripana fanafanana indrindra, ny fihazonana ny fotoana sy ny tahan'ny fihenam-bidy, ary amin'ny alàlan'ny fandrindrana tanteraka ny teknolojia fanamainana sy ny teknolojia fanamainana, izany hoe ny fitaovana fanafanana, ny hafanan'ny hafanana, ny rivotra iainana ary ny fitaovana fampangatsiahana, ny fitaovana fampangatsiahana, hahazoana ny rafitra metallographic, ny toetra mekanika ary ny toetran'ny mekanika amin'ny fametahana kodiarana . Mampiasà fampisehoana. Omeo kilalao feno ny mety ho fitaovana, ary ialao ireo kilema fitsaboana ny hafanana (fiovana, fanimbana, triatra ary rafitra tsy mahazatra, sns.), Noho izany, ny fitsaboana ny hafanana dia fomba fiasa tena lehibe sy tena ilaina amin'ny famoronana famonoana kodiarana.
Saika ny famonoana kodiarana mangatsiaka, mafana ary mafana rehetra dia tsy maintsy mandalo fitsaboana hafanana mba ho lasa faritra mahafeno fepetra. Ny haavon'ny haitao fitsaboana ny hafanana dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiantohana sy fanatsarana ny fahombiazana, ny fahamendrehana, ny fitoniana ary ny ain'ny serivisy an'ireo faritra ireo. Mandritra izany fotoana izany, ny akora, ny fanafanana, ny fizotry ny fisandohana sy ny fampangatsiahana dia misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny hafanana amin'ny fametahana kodiarana. Ny roa dia misy ifandraisany akaiky ary tsy azo sarahina.